[Tribune] Midowga Afrika waa fariin ku saabsan is dhexgalka Afrikaanka - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA [Tribune] Midowga Afrika waa fariin ku saabsan is dhexgalka Afrikaanka - JeuneAfrique.com
[Tribune] Midowga Afrika waa fariin ku saabsan is dhexgalka Afrikaanka - JeuneAfrique.com
En février 2019 s’est tenue à Yaoundé, au Cameroun, la troisième session du Comité technique spécialisé de l’Union africaine (UA) sur les finances, les affaires monétaires, la planification et l’intégration économiques. Cette instance a opté pour l’entrée en service d’une Banque centrale, d’un Fonds monétaire africain, d’une banque d’investissements et d’une Bourse panafricaine en… 2045 !
Mashruuca Ururka Midawga Afrika ayaa dhab ahaantii ka soo duulay magaalada Lagos, 1980, Shirka Ururka Midnimada Afrika (OAU, ayaa lagu kala direy 2002 si loo sameeyo AU). Waxay ahayd si fiican ka hor bilowga euro.
Oo uu sal-dhigida waxaa loo qorsheeyay 1990 laakiin Dhanka kale, OAU waxay ahayd in ku abuuray Bulshada African Economic (AEC), waxayna u maleeyeen inay keeni qaadida caadooyinka caqabadaha, dhaqdhaqaaqa xorta ah ee dadka, abuurka ah ee lacagta ah tixraaca farsamo , sidii hore ee gaashaanka u ah Yurub, iwm. Markii ugu danbeysay ee ka soo gaaray, madaxda OAU eryay hirgelinta ECA in 2025 jid toosan, waa in la yidhaahdo, ilaa hadda ku filan in mid ka mid ahaa madaxda wakhti mar dambe in ay ganacsi.
Afrika wuxuu ahaa midka kaliya ee ku fashilmay in uu gaaro mid ka mid ah Hadafyada Horumarinta Kun-sanadka (MDGs)
Tan iyo markaas, weerarkani wuxuu noqday inuu noqdo xukunka guriga. Afrika ayaa ahaa oo ah qaaradda kaliya ee aan ku guulaysan mid ka mid ah Hadafyada Horumarinta Kun-sanadka (OMD) ayaa 2000 ka bilowday UN-ta muddo shan iyo toban sano ah, iyada oo deyntiisaba laga tirtiray arrintan. Kaliya saddex dal ayaa udubdhexaad u ah ujeedada asaasiga ah ee lagu qorayo dhamaan caruurta waxbarashada aasaasiga ah.
2015, QM waxay dib-u-habayn ku samaysay qorshaheeda iyada oo loo bedelay MDGs Himilooyinka Horumarka Sare (ODD), si loo gaaro 2030. Inkasta oo ay ku howlan tahay, Midowga Afrika wuxuu joojiyay qorshihiisa qudh ah Agenda 2063, taasina waxay dib u riixaysaa guulihii ay gaareen ee SDGs. Sidaa darteed Afrika waxay doorbidday mar kale inay soo saarto waqtiga kama dambaysta ah iyagoo dooranaya taariikh calaamad ah - boqolkiiba siddeedaad ee OAU - illaa iyo hadda waxay ka soo horjeedaa qiyaasta macquul ah.
Jadwal ma leh Bangiga Dhexe
Maanta Mashiinka Bangiga Dhexe ee 2045 Adigoon Jadwalka - Maxaa Loogu Xanuustay 2029 ama 2048? - wuxuu ka yimaadaa meelo isku mid ah. cidhibtii of indolence tani waa dayactirka ah ee burbursan Africa a xanuunka sarrifka aad u yar nafteeda la, afkiisa iman kara horumarinta, tiriska ahaa dalalka uu aad ugu mahad naqayaa suuqyada caalamiga ah iyo fududeynta ay Fatxi by quruumaha voracious.
Qaadashada warbixinta konton iyo lixdan kaddib marka la abuuro ururkii ugu horreeyay ee siyaasadda argagixisada ee afrikaanka ah maaha mid aan hore loo dhicin, midna si fudud ayuu u arki karaa in tallaabadani aysan keenin isdhexgalka waddamada. Waxay xitaa dib u dhigtay, iyada oo la sii waday dadka afrikaanka ah, iyagoo khiyaanaynaya hawlgalkan.
Faransiiska CFA waxay weli tahay tusaale kaliya ee isdhexgalka Afrika ee shaqeeya
Inaad ogaatid baahida loo qabo in laga baxo - ama ugu yaraan inay ku soo dhowaato - waxay u oggolaanaysaa waddan kasta oo doonaya in uu horey u sii maro suuqyada isku dhafan si uu u muujiyo jidkiisa isaga oo ku biiraya tabarucayaal kale oo horumarineed. Haddii dariska on qaaradda iyo ka shishe ama ma, ka Brazil Norway iyada oo Bahamas ... Anyway, dhibic u weyni waa in ay leeyihiin suuqa weyn, maamulaa xeerarka caadiga ah sharci, dhaqaale iyo siyaasad. Waxaa laga yaabaa inay wakhti u tahay in la raadiyo isdhexgalka 2.0 iyada oo tixgelinaysa in qaaradaha ay yihiin shir siyaasadeed oo aan ahayn caqabado aan caqli gal ahayn.
Haddii, loogu talagalay UA, qaan-gaarnimada 2045 waa jawaabta dood ku saabsan ka bixitaanka Faransiiska CFASidoo kale waa in la xasuustaa in lacagtani ay ku badan tahay afar iyo toban dal oo Afrikaan ah oo weli ah qaabka kaliya ee isdhexgalka Afrika ee ka shaqeynayey si aan wanaagsanayn muddo lixdan sano ah. Tusaalaha labaad wuxuu ahaa hawada Afrique, kaas oo soconayey afartan sannadood iyo iskuday badan oo ku saabsan dib u soo celinta Afrika ayaa ku fashilantay tan iyo markii la soo daayay 2002. Wadashaqeynadan wadamada koonfureed waxaa suurto galiyey oo kaliya tartan dibadeed. Midowga Afrika, oo si fiican u seexday bini-aadamnimadeeda, waxay sii wadaa inay ka jawaabto dhammaan tallaabooyinka ay wadajir u tahay in ay tahay mid deg deg ah oo lagama maarmaan ah in la sugo.
Afrika, balanqaad. Sidee Afrika ugu soo dhawaataa, Hervé Mahicka, Michal editions, 2018.
Beerta suuqa, Macadamia nuts ... Phoenix Global mashruucyada beeraha - JeuneAfrique.com
Côte d'Ivoire: Hotel Pullman ayaa furan laba sano ka dib shaqo - JeuneAfrique.com